ပြည်တွင်းရေးရာ Archives | Page3of4| Frontier Myanmar
စတုတ္ထအကြိမ် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ အခင်းအကျင်းကို ရှုမြင်ကြည့်ခြင်း
ယနေ့စတင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံသည် အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောင်မြင်မှုအချို့ရယူနိုင်မည့် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပေမယ့် ဘဝအိပ်မက်ကိုလက်မလျှာ့လိုက်တဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍက မသန်စွမ်းအလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့
Aye Aye Aung၊ ဝင်းဇာနည်အောင် နှင့် Samuel ရေးသားသည်။
အင်န်အယ်လ်ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ထဲ အလျင်အမြန် ဝင်ပါဖို့ လိုပြီ
နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေအရ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရပြီး သမ္မတ တင်နိုင်၊ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့မှာ သေချာသွားပါပြီ။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေအရ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရပြီး သမ္မတ တင်နိုင်၊ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့မှာ.
ဟားခါးပေါက်ကွဲမှု ခြောက်ဦးသေ၊ ဗုံးကွဲခြင်းမဟုတ်ဟု ရဲဌာနကောက်ချက်ချ
ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် တနင်္ဂနွေည ၁၁ နာရီက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူခြောက်ဦးသေဆုံးပြီး ခုနစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ဟု ချင်းပြည်နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် သန်းကျော်ဌေးက Frontier သို့အတည်ပြုပြောကြားသည်။ သို့သော် ပေါက်ကွဲမှုသည် “အကြမ်းဖက်မှုအသွင်ဆောင်သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၊ ဖောက်ခွဲမှု” မဟုတ်ဟု တွေ့ရှိသည့်အထောက်အထားများအရ ရဲဌာနက.
ရုပ်သေးပညာရှင် တစ်ဦး၏ ရုပ်သေးအနုပညာကိုရှင်သန်စေရန် ကြိုးပမ်းမှု
ပြည်တွင်းတွင် ပရိသတ်ရရှိမှု နည်းပါးလာမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ခေတ်မီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ရုပ်သေးပြပွဲများကို မွမ်းမံလျက်ရှိသည်။
ကာတွန်းဆရာများနှင့် သရော်စာရေးခြင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ရုပ်ပုံများဖြင့် သရော်ခြင်း၏ အစွမ်းတန်ခိုး
အမျိုးသားသဘာဝရေဘေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်၌ ပျံ့နှံ့နေသော ကာတွန်းတစ်ခုတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်၏ ရုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ဦးသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင့် အတော်ဆင်ပြီး ခါးလယ်ခန့်ရှိ ရေထဲတွင် ရပ်နေသော ပြည်သူများကို လှေပေါ်မှနေ၍ ကုန်စည်များကို ဖြန့်ဝေနေသည်။